Dhacdooyinka Spotify ee Abriil 24 ee New York | Wararka IPhone
Dhacdooyinka Spotify ee Abriil 24 ee New York
Waxyaabo badan ayaa ka socda Spotify beryahan dambe, guud ahaan si ka wanaagsan, maantana waxaan baranay inay heystaan ​​warar dheeraad ah oo ay noo sheegaan. Gaar ahaan, 24-ka Abriil magaalada New York waxay ku dhawaaqi doonaan nooc nooc ah.
Casuumaada ay heleen qaar ka mid ah warbaahinta ayaa ah mid kooban oo aan macluumaad badan bixin karin:Kaydso maalinta. Spotify waxay kugu martiqaadeysaa xayeysiiska warbaahinta. Subaxnimada Talaadada, Abriil 24. New York".
Sida iska cad, waxay noqon kartaa nooc kasta oo xayeysiis ah. Tusaale ahaan, waxay si fudud u noqon kartaa qiimeynta IPO-gaaga. Sidee u xasuusataa, Spotify ayaa maalmo ka hor soo shaac baxday. Waxay ahayd meel rajo leh oo loogu talagalay barnaamijyada muusikada qulqulaya.
Sidoo kale, waxay ku qiyaasaan inay gaarayaan ilaa 92-96 milyan bixinta macaamiisha dhamaadka sanadka (Dhanka kale, Apple Music ayaa dhawaan ku dhawaaqday garaacista 40 milyan), sidaa darteed waxay noqon laheyd waqti ku habboon in lagu soo jiito saamileyaal cusub.
Waxaa kale oo jira war xun, sida ku dhowaad laba milyan oo isticmaaleyaal bilaash ah oo ka fogaanaya xayeysiinta. Kama saari karno inay tahay isbeddel ku yimid qaabkeeda ganacsi, maaddaama Spotify uu yahay mid ka mid ah bixiyeyaasha muusikada ee qulqulaya ee ilaaliya adeegga bilaashka ah. Waxay sidoo kale sii haysaa iyada oo rajeyneysa in isticmaaleyaasha isticmaala Spotify ee bilaashka ah ay noqon doonaan kuwa isticmaala ee wax bixiya, wax aan dhici doonin haddii ay ka cararaan xayeysiinta.
Waxaa jira warar si gaar ah ugu khuseeya dadka isticmaala Apple waxaana laga yaabaa in lagu dhawaaqo Abriil 24. Waxaan ula jeedaa barnaamijka xanta loogu talagalay Apple Watch, taas oo kutiri kuteenku ku tilmaamay "inay baxeyso." Muusikada ku jirta Apple Watch waa, in badan, waa qodob muhiim u ah doorbidista Apple Music ka badan Spotify. Shaki la’aan, waxay noqon doontaa afgambi. Isbaanishka, marka lagu daro, maqnaanshaha Apple Watch LTE, Spotify iyo Apple Music waa inay maraan iswaafajinta iPhone, sidaa darteed waxay ku ciyaarayaan isla heer.
Laakiin haddii uu jiro ogeysiis aan doonayo inaan maqlo, waa tan Waxaan soo sheegnay dib-u-fiirinta bishii Febraayo: Afahayeen u gaar ah ama cod raadin ku hadla cid saddexaad. Spotify waxay tijaabinaysay "kaaliyeheeda", taas oo umuuqata inay diirada saareyso bixinta qaab looga codsado muusikada afhayeenka. In kasta oo aynaan wax badan ka ogayn, haddana waxay ku guuleysteen inay sir ka dhigaan.
24-ka waxaan qabnaa shakiyo waxaanan kugula socodsiin doonaa si dhakhso leh wararka. Ilaa waqtigaas, waa tan liiska Spotify ka soo baxa podcast-keena! Okay kaalay, Halkan waxaad ku haysaa Apple Music ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Dhacdooyinka Spotify ee Abriil 24 ee New York
Inkasta oo aynaan wax badan ka ogayn, waxaa laga yaabaa inay ku guuleysteen inay sir ka dhigaan.
Haddii aan ognahay, waa qalab loogu talagalay in lagu dhegeysto muusikada gaariga.
Nabade Keko! Waxaan sidoo kale maqlayay saacadahan ugu dambeeyay. Markii hore waxaan moodayay inay tixraacayaan kaaliyaha codka ee ay tijaabinayeen waqti hore, laakiin waxay umuuqataa inay tixraac dheeraad ah u dirayaan Spotify "Chromecast audio" si ay ugu xirmaan gaariga (oo aan jeclaan lahaa, dhinaca.). Laakiin waxaan ka shakisanahay inay taasi run tahay.
Haddii aan dhaho, waxaan arkaa bandhig si aan ugu soo jiito maalgashadayaasha warar yar.
Sida loo hagaajiyo saacadda Apple Watch oo barafoobaysa muujinta tufaaxa tufaaxa
Star Wars: Jedi-kii ugu dambeeyay ayaa hadda laga heli karaa iTunes, sidoo kale waad dalban kartaa Ready Player One